लेखन/संकलनमा लागिरहने छु – भगिराज इङ्नाम
यस बर्षको मदन पुरस्कार लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहका लेखक भगिराज इङ्नामलाइ प्रधान गरिने भएको छ । मदन पुरस्कार गुठिको बिहिबार बसेको बैठकले सो कृतिलाइ मदन पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो । उनै भगिराज इङ्नामसँग केन्जो खबरका सम्पादक सरला रेग्मिले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः
तपाइँले लेखेको लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहले नेपालको प्रसिद्ध मदन पुरस्कार प्राप्त गर्यो ? तपाइँलाई कस्तो अनुभूति भैरहेको छ ?
यो नेपाल गौरवको अनुभूति भएको छ । नेपालमा मदन पुरस्कारलाई ठुलो पुरस्कारको रुपमा लिइन्छ । राष्ट्रिको सम्मान पाउदा अत्यन्तै खुसि तथा सारै आनन्द लागेको छ ।
निक्कै मेहनत गरेर निक्कै मोटो किताब छाप्नु भएको छ ? यस्को लेखनयात्रा कहिलेबाट सुरुभयो ?
म सरकारी जागिरेबाट रिटयार भएको मान्छे । , सरकारी जागिर खाने क्रममा धेरै लोकसेवाका किताबहरु पढ्नु पथ्र्यो । लेखन यात्रा कार्य २०७० सालमा सुरु भयो । त्यतिबेला सहलेखनमा तेह्थुम जिल्लामा सुभाङ्गी प्रथा भन्ने पुस्तक लेखेको थिए । तेह्थुम सहलेखनमा लेखेनपछि लिम्बुवान जातीको अर्को इतिहास भन्ने पुस्तक निकाले । पाँचथरमा फिदिम याङ्नाम,याङ्बरक, यासोक, पन्चमि लगातार घुमेर काम गरेको थिए । यो किताब संकलन, लेखनका लागि करिब सात बर्ष लेख्यो ।
तपाईं पुर्व प्रशासक समेत हुनुहुन्छ । लेखन संकलन तर्फ ध्यान कसरी गयो ?
हाम्रो बाबु,बाजे, सुब्बाहरु हुन् । उनिहरुसँग लालमोर छ भन्ने थाहाथियो । त्यो मात्र होइन यो त एकसय बर्ष बढी पुराना दस्तावेज ऐतिहासिक हुन्छ भन्ने थाहा थियो । बाबुबाजे ,बन्धुहरुले संकलन गरेर राखेको लालमोर समयसँगै हराउला कि भन्ने महसुस गरेर खोजेर अनुसन्धान गरेर राखे । यो मेरो मात्र होइन राष्ट्रको सम्पती हो । खास गरि सरकारले खोज्नुपर्ने थियो । तर सरकारले नसकेपछि त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि, भाबी पुस्ताको लागि, राष्ट्रको सम्पतिको लागि,समुदायको सम्पतिको लागि सम्झेर खोज अनुसन्धान गरेको हु ।
मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नु भयो ।देश बिदेशबाट बधाई, शुभकामना आइरहेका छन् । भावी योजना के रहेका छन् ?
भावी योजना खासै छैन । यहीँ संकलनमा पनि कयौ दस्तावेजहरु समाबेश गर्न सकेको छैन । पाँचथरकै कयाँै छुटेका छन् । बाँकि रहेका कुराहरु खोज्ने छ मदन पुरस्कारले थप हौसला दिएको छ । पाँचथर, तेह्थुम लगायतका क्षेत्रघुमेर सकेसम्म छुटेका दस्तावेज फेरि समेट्ने छु । लेखन÷संकलनका काम सकेसम्म गर्ने छु ।